Yakha ishishini lakho nge-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Yakha ishishini lakho nge-Instagram
Disemba 15, 2018 0 IiCententarios 659
Uyakha kanjani ishishini lakho nge-Instagram ukuze ufumane imali
Njengayo nayiphi na enye inethiwekhi yezoluntu, Instagram Ingasetyenziselwa ukwakha uphawu lweshishini lakho xa lisetyenziswe ngendlela elungileyo nefanelekileyo. I-Instagram isebenza njengesixhobo sokwenza ukuba ishishini lakho lifumaneke kubathengi. Kwakhona Sikuxelela indlela yokukhuphela amabali e-Instagram amadala.
Ukuthengisa intengiso kwimidiya yoluntu usebenzisa i-Instagram kungavula umhlaba wamathuba e-brand yakho. Ke ngoko, kuyacaca ukuba Instagram ibaluleke kakhulu ishishini lakho. Umbuzo ophakamayo malunga nendlela onokuyakha ngayo ishishini lakho nge-Instagram kwaye ngezantsi impendulo yalo mbuzo.
Okokuqala, kufuneka wenze uphando ukuze wazi okona kulungileyo Iinkampani ze-Instagram. Kuya kufuneka ujonge ezinye ii-brand kwishishini kwaye ubazi nokuba ngoobani na abakhuphisana nawe ukuze wazi ukuba zeziphi iindlela onokuzisebenzisa ukwakha ishishini lakho. Kuya kufuneka usoloko ubeka iinjongo ze-Instagram ezinxulumene neenjongo zakho zeshishini.
Ezi njongo kufuneka zibandakanye ukwazisa okwandayo ngesikhokelo se-hashtag. Yandisa ukuqonda kwemveliso kunye nokwandisa ukugcwala kwiwebhusayithi yakho. Sikwaxelele nokuba njani khubaza i-Instagram.
Sikuxelela indlela yokwakha uphawu lwakho kwi-Instagram
Okulandelayo, uya kuyila iqhinga lokupapasha umxholo wakho. Apha kuya kufuneka uqwalasele imilinganiselo oyipapasha ngayo, ixesha lopapasho kunye nokukhethwa kwezihloko zomxholo. Kuya kufuneka ugcine ukushicilelwa rhoqo kwaye, kwangaxeshanye, uphephe ukupapashwa okugqithisileyo.
Recuerda que Instagram konke malunga nokubonwayo. Ifoto yakho yeprofayile kufuneka ibe yelogo yenkampani yakho. Kuya kufuneka ukhethe icebo lokucoca ulwelo oya kulisebenzisa kwiifoto zakho ezininzi. Ngokukhetha isihluzo kwiifoto zakho wenza uphawu lwakho lubonakale lula. Iifoto zakho zilula kubalandeli bakho. Qiniseka ukuba uthumela iifoto ezibonisa isimilo kunye nenkcubeko yeshishini lakho.
Ukuba akuqinisekanga ukuyimela kakuhle inkampani yakho, kuya kufuneka uqwalasele ukubeka iliso kwiiakhawunti zabalandeli bakho ukuze wazi ukuba babelana ngantoni. Oku kuyakuvumela ukuba wazi iindlela zakho kwaye, ke, kuya kukunceda ukuveza ishishini lakho ngokufanelekileyo. Siyakuxelela nawe indlela yokuvula i-Instagram.
Enye indlela onokuyisebenzisa ukuphuhlisa yakho ishishini ngaphakathi Instagram Luhlobo lwe-hashtag. Kuya kufuneka ufumane i-hashtag ebandakanya uphawu lwakho lwe-Instagram kwaye ukhuthaze abalandeli bakho ukuba babelane ngeefoto ezilingana nalo mfanekiso. Oku kuyakuvumela ukubonakala kweempawu zakho kubathengi abatsha kwaye eli lithuba lokuba ishishini lakho likhule.
Kuya kufuneka uqwalasele iilebheli zendawo. Oku kongeza indawo yakho kwiifoto zakho xa uzishicilela. Isebenza kakhulu kuba yenza abalandeli bakho bazi ukuba bangakufumana phi kunye nenkampani yakho.
Ngapha koko, abalandeli abahlala kufutshane nawe bayakuthanda ukunxibelelana nawe kunye neshishini lakho. Kuya kufuneka upapashe izinto ezikhethekileyo, kuba unako Thenga abalandeli kwi-Instagram.
Oku kungenziwa ngokunikezela ngezaphulelo kubalandeli bakho, kuya kubenza bazive bebalulekile kwaye, ngenxa yoko, uyakuxelela abanye abantu malunga neshishini lakho. I-Instagram ingasetyenziselwa ukwakha ishishini lakho, yizame namhlanje kwaye ujabulele izibonelelo.
Unokuba nomdla wokukhuphela i-Instagram ngqo.
1 Uyakha kanjani ishishini lakho nge-Instagram ukuze ufumane imali
2 Sikuxelela indlela yokwakha uphawu lwakho kwi-Instagram
3 Yakha ishishini lakho nge-Instagram
Disemba 15, 2018
Ngaba iluncedo ukuthenga abalandeli kwinethiwekhi yoluntu?
Fumana imali nge-Instagram ngokulula